Social Media Bụ PR ọhụrụ | Martech Zone
N’oge na-adịbeghị anya mụ na ụfọdụ n’ime ndị ọkachamara mmekọrịta ọha na eze na-eri nri ehihie, ma dị ka mgbe niile mkparịta ụka ahụ tụgharịrị na ụzọ na usoro eji arụ ọrụ anyị. Dị ka naanị otu n'ime ndị otu na-eji usoro mgbasa ozi dịka otu ụdị nkwukọrịta maka ndị ahịa, akụkụ m na mkparịta ụka ahụ ga-adị ka nke kachasị mkpụmkpụ. Nke a mechara bụrụ eziokwu, ọ mekwara ka m chee: Social media abụkwaghị akụkụ nke PR ọzọ-social media is PR.
Kwa ụbọchị na akwụkwọ akụkọ PR na akwụkwọ akụkọ anyị na-anụ ụzọ iji tinye mgbasa ozi mmekọrịta na atụmatụ PR gị dum. M na-atụba ihe nwere obi ike ebe ahụ: mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụrụ isi ihe nke atụmatụ PR gị, ma wulite nkwukọrịta ọdịnala gị gburugburu.
Agaghị enweta ọkwa na mgbasa ozi na mgbasa ozi mmekọrịta. Na Ndị ọrụ 500 nde on Facebook, 190 nde on Twitter, na ijeri vidiyo abụọ kwa ụbọchị na-elele na Youtube, enweghị ndị na-ege ntị nwere ike karịa ka enwere ebe ọ bụla ọzọ. Isi ihe bụ ịghọta otu esi eji nyiwe ndị a mee ka akara gị n'ihu ọtụtụ ndị a dị ka o kwere mee.
Ọtụtụ mmadụ ga-ajụ, "Gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ itinye akara anyị na ndị na-ajụ ase dị ka igwe onyonyo, redio, na mbipụta?" Azịza m ka dị, jiri soshal midia.
Majorlọ ọrụ mgbasa ozi ọ bụla dị na mba dị iche iche na-enyocha mgbasa ozi ọha na eze, ụlọ ọrụ mgbasa ozi mpaghara na-emekwa otu ihe ahụ. Isi ihe dị na ya bụ ịmepụta na biputere ọdịnaya na ibe gị ọbụlagodi mgbe enweghị akụkọ na-apụta site na nzukọ gị. Ọ dị oke mkpa ịghọta na ịnabata echiche a.
Ọdịnaya abụghị naanị ikenye ihe mgbe ị nwere ihe ị ga-ekwu. Ọdịnaya bụ akụkụ nke mkparịta ụka ahụ.
Isi ihe a niile bụ iji mesie eziokwu ahụ ike na oge eruola ka ụlọ ọrụ tinyekwuo oge ma lekwasị anya na mgbasa ozi mmekọrịta mgbe ọ bịara n'usoro PR ha. Ọ bụrụ na ebumnuche nke mgbasa ozi ọha na eze gị bụ iji gwa ndị ahịa gị, ndị na-ere gị na ndị mgbasa ozi okwu, mgbe ahụ mmekọrịta mmadụ na ibe gị bụ ngwa gị.
Anaghị m ekwu na onye ọ bụla kwesịrị ịkwụsị mgbasa ozi mgbasa ozi ọdịnala ha. Kama nke ahụ, mgbasa ozi mmekọrịta bụ ebe ị ga-ahụ ndị ahịa gị, ndị isi echiche, na ndị nta akụkọ, yabụ ịtụkwasị ihe ntanetị gị n'ịntanetị ga-enye gị nkwụghachi dị elu na itinye ego.
Tags: prmmekọrịta ọhanezemgbasa ozi mmekọrịta na mmekọrịta ọha na eze